MBUPU NDỊ MBUPỤ SITE NA OUTLOOK 2010 - OUTLOOK - 2019
Anyị na-ebute kọntaktị site na Outlook
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ihe nkesa nke Outlook na-enye gị ohere ịchekwa data dịgasị iche, gụnyere kọntaktị, n'ime faịlụ dị iche. Akụkụ a ga-aba uru karịsịa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ kpebiri ịgbanwe gaa na nsụgharị ọzọ nke Outlook, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe kọntaktsị na usoro email ọzọ.
Na ntuziaka a, anyị ga-eleba anya na ị nwere ike ibubata kọntaktị na faịlụ mpụga. Anyị ga-eme ya na ihe atụ nke MS Outlook 2016.
Ka anyị malite site na "File", ebe anyị ga-aga na ngalaba "Open and Export". N'ebe a, anyị pịa bọtịnụ "Bubata na mbupụ" wee gaa n'ihu ịmepụta mbupụ data.
Ebe ọ bụ na anyị chọrọ ịchekwa data kọntaktị, na windo a anyị na-ahọrọ ihe "Mbupụ na faịlụ" wee pịa bọtịnụ "Next".
Ugbu a họrọ ụdị faịlụ ịmepụta. Naanị ụdị abụọ ka a na-enye ebe a. Nke mbụ bụ "Ụkpụrụ Zoro Eke," ya bụ, faịlụ CSV. Nke abụọ bụ "Data Data File".
Ụdị faịlụ ndị mbụ nwere ike iji nyefee data na ngwa ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ na usoro CSV.
Iji mbupụ kọntaktsị na faịlụ CSV, họrọ "Ụdị Ụkpụrụ Zoro Ezi" ma pịa bọtịnụ "Next".
N'ebe a na nchekwa osisi, họta "Ndi ana-akpo" na mpaghara "Data Data File" ma gaa n'ihu nzọụkwụ site na ịpị bọtịnụ "Next".
Ugbu a ka ịhọrọ nchekwa ebe a ga-echekwa faịlụ ahụ ma nye ya aha.
N'ebe a, ị nwere ike hazie mpaghara ahụ kwekọrọ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị. Ma ọ bụ pịa "Mecha" na Outlook iji mepụta faịlụ na folda ahụ akọwapụtara na nzọụkwụ gara aga.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ mbupụ data kọntaktị na ụdị ọzọ nke Outlook, mgbe ahụ, na nke a, ị nwere ike ịhọrọ "Data Data File (.pst)" ihe.
Mgbe nke ahụ gasịrị, họta nchekwa "Ndi ana-akpo" na ngalaba "Data Data File" wee gaa na nzo ozo.
Kọwaa ndekọ na aha faịlụ. Na họrọ kwa omume na duplicates ma gaa nzọụkwụ ikpeazụ.
Ugbu a ịkwesịrị ịhọrọ otu n'ime ọrụ atọ dịnụ maka kọntaktị abụọ ma pịa bọtịnụ "Mechie."
Ya mere, ịbupu ozi data kọntaktị dị mfe - naanị nzọụkwụ ole na ole. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike mbupụ data na nsụgharị ndị ọzọ nke onye ahịa mail. Otú ọ dị, usoro mbupụ nwere ike ịdị iche na nke a kọwara ebe a.